I-Apple TV ngoku ibandakanya ukukhangela kwiSpike kunye neNickelodeon | Ndisuka mac
Ukuphuculwa okuqhubekayo kwenkonzo nganye efumanekayo kwiApple kubathengi bayo ngoku inika isahluko esitsha. Njengento entsha, I-Apple TV isizisela le veki uhlaziyo kuphando lwayo phakathi kwezicelo. Ukusukela izolo, siya kuba nakho ukukhangela umxholo ukusuka UNickelodeon kunye noSpike Kwinjini yokukhangela emiselweyo yeApple TV yethu.
Njengemfuneko ebaluleke kakhulu, I-Apple TV kufuneka ibe sisizukulwana se-4, kwaye ihlaziywe kuhlobo lwamva nje. Ukongeza, iApple iphucula inkxaso yeapp yeTV kumacebo e-iOS.
Ngaphandle kweziphumo zophando kwindalo iphela, kwiApple TV sinako khangela kwaye uchonge ezo zicelo ezifakwe kuyo, kunye nesiqulatho esibonelelwa sisicelo ngasinye ngokusekwe kukhangelo olwenziwe.
Ezi zicelo zintsha zakhiweyo zijoyina esele zihambelana IHulu, iHBO ngoku okanye iNethiwekhi yeKhathuni, phakathi kweenkonzo ezingama-56 ezahlukeneyo okanye izicelo. Nangona uninzi lwazo ngoku lusebenza eMelikaKulindeleke ukuba kancinci kancinci kulo nyaka siqale ukubona olu phawu kwamanye amazwe, okanye ubuncinci kwiqela elikhethiweyo.
Ujongano lubonelela ngolawulo oluphambili lweemovie kunye nemiboniso yeTV, ukudibanisa iinkonzo ezahlukeneyo ezakhelweyo. Oku kunokusinceda ukuba sifumane izinto ezintsha kunye neeapps ezintsha ukuzama.
Asinakulinda ukuzama ukukhangela okukuko okuba ngcono. Kuya kufuneka sikhumbule ukuba, ngenxa yeengxaki zomxholo kunye namalungelo, iApple ayikhange iyongeze le nkonzo. Inyaniso, Emva kwe-United States, elona lizwe lineenkonzo ezininzi ezikhoyo yi-Australia, zine-8 kuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple TV ngoku ibandakanya ukukhangela kweSpike kunye neNickelodeon